दाङमा इतिहास दोहोर्‍याउने कसरतमा महरा... :: चन्द्र काफ्ले :: Setopati
दाङमा इतिहास दोहोर्‍याउने कसरतमा महरा र खनाल
ठिक एक महिनाअघि कात्ति क १६ गते दाङ देउखुरी जिल्ला अदालत परिषरमा उम्मेद्वारी दर्ता गर्नेक्रममा कृष्णबहादुर महरा र राजु खनालले एक अर्कालाई अंकमाल गर्दै जितको शुभकामना दिएका थिए। यी दुई एउटै क्षेत्रबाट एउटै पदका लागि प्रतिपर्धी हुन्। दाङको निर्वाचन क्षेत्र नं. २ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य पदका लागि उनीहरू मैदानमा उत्रिएका छन्। नेपाली काँग्रेसका उम्मेदवार एवं पूर्व सांसद समेत रहेका खनालले आफ्नो उम्मेद्वारी दर्ता गरेर निस्किँदै गर्दा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका महरालाई ‘दाजु नमस्कार’ भन्दै आदर गर्दा महराले पनि भाइचारा प्रस्तुत गर्दै हात अगाडि बढाएका थिए। त्यसक्रममा एकले अर्कालाई अंकमाल गर्दै जितको शुभकामना दिएका थिए।
महरालाई खनालले स्वास्थ्य अवस्था र सञ्चो विसञ्चो सोधेका थिए। महराले पनि त्यसै गरेका थिए। ‘मैले उहाँलाई मतदान गर्छु र उहाँले मलाई मतदान गर्नु हुन्छ।’ महराले खनालको हात सुमसुम्याउँदै त्यही भनेका थिए। यी दुई प्रतिपर्धीले एक अर्काप्रति गरेको व्यवहार र व्यक्त गरेको सम्मान देखेर आसपासमा उभिएका समर्थक तथा कर्मचारीको मुहार रोमाञ्चित बनेको देखिन्थ्यो। दुवैले निर्वाचन शान्ति पूर्ण वनाउने वाचा पनि गरेका थिए।
यथार्थमा विनाविभागिय मन्त्री समेत रहेका महरा दाङवासी हैनन्। उनले आफैँले आफूलाई समेत मतदान गर्न पाउँदैनन्। कारण, उनको पुर्खेउली घर रोल्पा हो। यद्यपी उनले हालसालै दाङको घोराहीमा पनि घर बनाएका छन्। त्यसैले उम्मेद्वारी दर्ता गराउँदै गर्दा महराले बोलेका शब्द ‘मैले उहाँलाई मतदान गर्छु र उहाँले मलाई मतदान गर्नु हुन्छ।’ भन्ने शब्दको अर्थ गहन रुपमा खोज्न थालिएको छ। ‘म आफैलाई मतदान गर्न पाउँदिन र तिम्रै ठाउँका मतदाताको सरणमा छु।’ महराले यही भन्न खोजेका हुन् कि भन्ने अड्कलबाजी लगाइँदैछ।
दुई नं. मा ४ जना उम्मेद्वार मतदानबाट वञ्चित
दाङको निर्वाचन क्षेत्र नं. २ अन्तर्गत बाम गठवन्धनका ३ र कांग्रेसका १ उम्मेद्वारले आफैँलाई भोट हाल्न पाउँदैनन्।
प्रतिनिधि सभाका लागि दाङ क्षेत्र नं २ बाट वाम गठबन्धनका उम्मेद्वार बनेका माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महरा, प्रदेशसभा तर्फ २ (१) का वाम गठबन्धनका उम्मेद्वार एमाले नेता शंंकर पोख्रेल, त्यही क्षेत्रबाट कांग्रेस उम्मेद्वार कमल किशोर घिमिरे र क्षेत्र नं २ (२) का वाम गठबन्धनका उम्मेदवार अमरबहादुर डाँगीले आफ्नो भोट आफैलाई हाल्न पाउने छैनन्। यी चारै जनाको मतदाता नामावली अन्य क्षेत्र र जिल्लामा रहेको छ। उनीहरुले आफूलाई समेत अब भोट नहालेर अरुकै भोटको भर र अपेक्षा गर्नु परेको छ।
हालसालै दाङको घोराहीमा घर बनाएको भएपनि महराको मतदाता नामावली भने रोल्पा जिल्लाबाटै रहेको छ। त्यस्तै एमाले नेता तथा २ (२) को प्रदेशसभामा उम्मेद्वारी दिएका शंकर पोख्रेलको घर २ (१) मा पर्छ। दाङको बिजौरी जनता क्याम्पसबाट मतदान उनले गर्ने छन। त्यस्तै पोख्रेलका प्रतिपर्धी तथा २ (१) बाटै काँग्रेसको तर्फबाट उम्मेदवारी दिएका कमलकिशोर घिमिरेको पुर्खेउली घर भने दाङको क्षेत्र नं १(२)मा पर्छ र उनको मतदाता नामावली पनि त्यँही छ। यद्यपि उनको घर घोराहीमा पनि छ। वामगठवन्धनका प्रदेशसभाका अर्का उम्मेदवार अमरबहादुर डाँगी २ (२)बाट चुनावी मैदानमा छन् र उनले पनि आफुलाई मतदान गर्न पाउने छैनन् । कारण उनको मतदाता नामावली २ (१) बाट छ। त्यसैकारण महरासहित वाम गठवन्धनका तीन जना उम्मेद्वार र एकजना कांग्रेसका प्रदेशसभाका उम्मेद्वार घिमिरेले आफैले आफैँलाई मतदान गर्न पाउँदैनन्।
विगत दोहर्याउने कसरतमा महरा र खनाल
दाङको क्षेत्र नं. २ मा बाम गठवन्धनको तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेद्वार एवं माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेता कृष्णबहादुर महरा हालसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा अपराजित छन्। महरा २०४८ को संसदीय निर्वाचनमा रोल्पा क्षेत्र नं. २ बाट, २०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा रोल्पा १ बाट र २०६४ सालको निर्वाचनमा दाङको यही क्षेत्रवाट निर्वाचित नेता हुन्।
पूर्व उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका महराले माओवादीको बैंस छँदा २०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसकी उम्मेद्वार अनिता देवकोटालाई हराएका थिए। ठिक त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसमा लोकप्रिय युवा नेताको छवि बनाएका पूर्व सांसद राजु खनालले २०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादी केन्द्र दाङका उम्मेद्वार निर्मल आचार्यलाई झन्डै दोब्बर मत अन्तचरले पराजित गरेका थिए। र अहिले फेरि त्यही क्षेत्रवाट महरा र खनाल दोस्रोपटक एउटै पदका लागि प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्। खनाल र महरा पहिलो पटक निर्वाचनमा आमनेसामने भएतापनि यी दुवै आफ्नो विगत दोहोर्याउने दाउमा छन्। रोचक पक्ष के छ भने दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन २०७० मा दाङका पाँचै स्थान काँग्रेसले ‘क्लीन स्वीप’ गरेको थियो भने २०६४ सालको निर्वाचनमा त्यसैगरी सबै क्षेत्र माओवादीले जितेको थियो। त्यसैले यसपालिको निर्वाचनमा कसको पल्लाभारी होला? भन्ने सवाल दंगाली मतदाताका माझ चासोको विषय बनेको छ।
गत असार १४ मा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा भने यस निर्वाचन क्षेत्र अन्तरगतका सबै तह एमाले र माओवादीले जितेका छन्। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका अन्तगतका ४ वटा वडा र घोराही उपमहानगरपालिका अन्तर्गतका १५ वटा वडा लगाएत निर्वाचन क्षेत्र नं. २ मा बंगलाचुली गाउँपालिका पनि रहेको छ । तुलसीपुर र घोराही उपमहानगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख एमालेले र बंगलाचुली गाउँपालिका मात्रै माओवादी केन्द्रले जितेको थियो।
यो निर्वाचन क्षेत्र अन्तगतको भूभागलाई जोड्दा स्थानीय तह निर्वाचनमा कांग्रेसले २० हजार ३ सय ५० मत प्राप्त गरेको थियो भने एमालेले २४ हजार ८८, माओवादी केन्द्रले १६ हजार २ सय ८ मत प्राप्त गरेका थिए। अहिले एमाले र माओवादी अर्थात वाम गठबन्धनको मत जोडदा ४० हजार २ सय ९६ मत पुग्छ। कांग्रेसभन्दा वाम गठबन्धनको मत झन्डै दोब्बरले बढी देखिन्छ। तर, स्थानीय निर्वाचन प्राविधिक कारणले हार्नु परेको स्वीकार गर्दै कांग्रेस उम्मेदवार खनलले अहिले पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापन राम्रो संग मिलाएको र एक ढिक्का भएर निर्वाचनमा होमिएको हुँदा दाङमा यसपटक फेरि कांग्रेसले विगत दोहर्याउने दाबी गरे।
‘स्थानीय तहको निर्वाचन र अहिलेको निर्वाचनमा ठूलो अन्तरछ। काँग्रेस हार्दा देशले हार्छ भन्ने हेक्का मतदातालाई स्पष्ट थाहाँ छ’– खनालले भने। ‘त्यसैले यो निर्वाचनमा दाङमा पुरै काँग्रेसले जित्दैछ।’ त्यस्तै उनले विगतमा माओवादीको ज्याजदी अझै एमाले कार्यकर्ताले नभुलेको हुँदा एमालेको धेरै मत आफुलाई आउने उनले दाबी गरे। तर, त्यतिधेरै मतान्तर घटाउँदै चुनाव जित्न भने अवस्यपनि खनाललाई सजिलो भने हुने छैन। त्यसैगरी पार्टीमा जति नै ‘हेबी वइटेड’ भएपनि महरा १० वर्षपछि फेरि दाङको त्यही ठाउँमा भिड्न आएका नेता हुन्। फेरि अर्काे तर्फ २०६४ सालमा जस्तो माओवादीको हालको अवस्था ‘बैंशालु’ छैन। अर्कोतर्फ उनलाई ‘फिरन्ते’ टुरिष्ट नेताको आरोप काँग्रेसले लगाउँदै आएको छ। अझै महत्त्वपूर्ण सवाल यही ठाउँबाट जितेर अर्थमन्त्री हुँदा समेत महराले दाङको विकासका लागि केही नगरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। त्यसैले २०६४ सालको विगत र विरासत फर्काउनु महरालाई पनि उत्तिकै चुनौति छ। खनाल स्थानीय नेता भएको कारण व्यक्तिगत सम्वन्धले गर्दा आफुले बामगठबन्धनको मत पाउने अपेक्षा गर्छन भने महरा घोराही क्षेत्रमा बसाइँसराई गरेर आएका रोल्पालीको मतका आधारमा आफू निर्वाचित बन्ने सपना बुनेका छन्। त्यस्तै गत असारमा भएको निर्वाचनको परिणाम अहिलेको वाम गठबन्धनले जितेको परिणाम ताजै हुनुले गर्दा महरा जित्छु भन्नेमा बढी ढुक्क छन्।
प्रकाशित मिति: सोमबार, मंसिर १८, २०७४, ०८:०७:१७